आफ्नो जहाजमा कुनै प्राविधिक खराबी नभएको बुद्ध एयरको दावी « Kalakhabar
आफ्नो जहाजमा कुनै प्राविधिक खराबी नभएको बुद्ध एयरको दावी
प्रकाशित मिति : सोमबार, १८ आश्विन २०७८ १७:१४
कलाखबर,१८,असोज–काठमाण्डौं । बुद्ध एयरले आफ्नो जहाजमा कुनै खराबी नभएको प्रष्ट्याएको छ। काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको जहाज त्यहाँ अवतरण गर्न नसकी काठमाडौं फर्किएको घटनापछि आएका विभिन्न टिकाटिप्पणीबारे बुद्ध एयरले स्पष्ट पारेको हो। बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक विरेन्द्रबहादुर बस्नेतले सोमबार यात्रुहरुको हितमा जारी गरेको सूचनामा कुनै निहित स्वार्थ बोकेकाहरुले नकारात्मक सूचना फैलाइरहेको बताइएको छ।
सूचनामा भनिएको छ, ुसो जहाजबारे अध्ययन गरिएको प्रारम्भिक रिर्पोट नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणमा सोहि दिन बुझाएका थियौं। त्यसबेला सो जहाजमा प्राविधिक समस्या नभएको भनिएको थियो। बुद्धले आफ्ना जहाजहरु ठिक अवस्थामा रहेको दावी गरेको छ। काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि ११ असोजमा उडेको बुद्ध एयरको जहाज ल्यान्ड हुन नसकेर पुनस् काठमाडौं फर्काइएको थियो।
त्यसो हो भए त्यो घटनाको मुख्य दोषी को होला ? बुद्ध एयरले आफ्नो जहाजमा कुनै प्राविधिक समस्या नै थिएन भनेर दावी गर्नुले पाईलट आङगेलु शेर्पालाई दोषी देखाएको सिधा अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । यदि यसमा पाईलट शेर्पा नै दोषी हो भने उनले आफू सहित ७७ जनाको किन ज्यान बचाउथ्यो र ?
यो पनि सर्बसाधारणका लागि एउटा प्रश्न र जिज्ञासा उब्जिएको छ । ल्यान्डिङ गियरमा समस्या देखिएपछि विराटनगर विमानस्थलमा जहाज अवतरण हुन सकेको थिएन। त्यहाँ अवतरण हुन नसकेपछि काठमाडौंमा ुनर्मलु अवतरण गरिएको थियो। बुद्धएयरले सोमबार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आन्तरिक जाँचबुझको रिपोर्ट बुझाएको छ।